Indlu yasehlotyeni enembono entle kakhulu. - I-Airbnb
Indlu yasehlotyeni enembono entle kakhulu.
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguHans T.
UHans T. yi-Superhost
Le yindlu yasehlotyeni yakudala yaseWest Coast eyathi yalungiswa ngokutsha ngo-2017. Inombono omangalisayo wefjord kunye neentaba ezineziqithi ezincinci ezithandekayo ngaphambili. Indawo ifanelekile ukuloba, ukuqubha kwi-fjord, ukuhamba kunye nokuphumla.
Indlu indala kwaye inomtsalane kwaye kwangaxeshanye intsha neyangoku. Ikhitshi linomatshini wokuhlamba izitya kunye ne-Nespresso-umatshini kunye nayo yonke into oyifunayo ukupheka (ngokuqinisekileyo ifriji, ifriji kunye ne-oven ye-elec.). Kukho imigangatho eshushu kwiholo nakwigumbi lokuhlambela kunye neeradiyetha zombane kwigumbi lokuhlala kunye nekhitshi. Sifake isitovu seenkuni ukuze indlu ifudumale nangeemini ezibandayo. Kumgangatho ongaphantsi uya kufumana izixhobo zokuloba, umatshini wokuhlamba kunye nefriji. Sinephenyane elincinane eliselwandle onokulisebenzisa ekulobeni nasekuphumeni uye eziqithini. Sinenjini encinci yombane yesikhephe.
Kwi-marina i-200 yeemitha kude nendlu sinesikhephe esikhulu - i-19 ft. Yamarin 5920 ukusuka kwi-2004 - kunye ne-115 hp. Injini yeYamaha. Esi sikhephe ungasiqeshisa ngerenti yemihla ngemihla ye-NKR 600 okanye iintsuku ezininzi (= intsebenzo engcono). Kuya kufuneka uhlawule idiphozithi ye-NKR 4000,- eya kubuyiselwa xa isikhephe sikhangelwe kwaye yonke into ilungile. Ukuba uzelwe emva komhla we-01.01.1980 udinga i-ICC (iSatifikethi saMazwe ngaMazwe sabaSebenzi boBugcisa bezolonwabo) (Ngoku: Båtførerbevis). Kuya kufuneka ube namava okuqhuba olu hlobo lwesikhephe ukuba uya kusiqeshisa.
Kukho induli ethe tyaba ukusuka kwindawo yokupaka ukuya kwindlu engenzelwanga ukuqhuba kwaye ukuhamba unyuka induli kuyadinisa kunye nomthwalo omninzi. Sinonxibelelwano lwe-intanethi oluvumela ukubukela iifilimu kunye nomabonwakude. Sine-TV enokusetyenziswa nge-hdmi-cable (ine-DVD eyakhelweyo). Ekubeni sihlala kude nendawo esinabo abancedisi kwisiqithi abanokuhlamba impahla kunye nokucoca. Kufuneka sizibhatale, ngoko ke ukuba ufuna ukurenta ilinen neetawuli (ungezi nezakho) kwaye ube nomntu okucocela indlu xa uhamba, kuya kufuneka uhlawule ngaphezulu (Nkr 150,- yelinen yokulala neetawuli. pr umntu, kunye Nkr 650,- yokucoca). Nceda usixelele into oyifunayo xa ubeka indawo yakho.
Kuyenzeka ukuba urente indlu phakathi kuka-Oktobha noMatshi. Ibhaso lerenti liya kuba ngaphantsi kwaye ubuncinci bokuhlala buyakuba yiveki enye. Ngeli xesha akukho wi-fi kodwa kunokwenzeka ukuba uodole ukuba unomdla. Iintsuku zikaNovemba zifutshane kakhulu kwaye amaxesha athile ebusika anokubanda kakhulu (kunye namaqondo angaphantsi), kodwa ngesitshisi sokhuni akukho ngxaki ukugcina indlu ishushu nangona ingekho yodwa kakhulu.
ibhedi ekhwele kwenye eyi-1, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
4.93 · Izimvo eziyi-109
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi109
Le ndawo inezindlu zasehlotyeni kwaye ezinye izindlu ezinabahlali bonyaka wonke. I-Onarheim yi-3 km kumzantsi-ntshona. Apha uya kufumana igesi, ivenkile yokutya kunye necafe encinci.
Umbuki zindwendwe ngu- Hans T.
Ujoyine nge- 2018 Matshi
Sihlala e-Oslo-kude le ndlu-ngoko awuzukudibana nathi apho, kodwa ungaqhagamshelana nathi ngomnxeba. Sinabatsha ababini basekuhlaleni abaza kusinceda ukuba sinyamekele indawo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iingxaki ezingaphendulwanga kwifolda endlwini, unokuqhagamshelana nathi.
Sihlala e-Oslo-kude le ndlu-ngoko awuzukudibana nathi apho, kodwa ungaqhagamshelana nathi ngomnxeba. Sinabatsha ababini basekuhlaleni abaza kusinceda ukuba sinyamekele indawo. Ukub…
Iilwimi: English, Norsk
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tysnes